Raadinta Maxalliga ah way sii kordheysaa, Xitaa Khariidada maku jirtaa? | Martech Zone
Wednesday, April 1, 2009 Talaado, Juun 23, 2015 Douglas Karr
Isku dayga inaad gasho bogga natiijooyinka raadinta ereyga ereyga muhiimka ah wuxuu qaadan karaa shaqo badan. Waxaan la yaabanahay tirada ganacsiyada maxalliga ah, in kastoo, aysan ka faa'iideysan Ganacsiga Ganacsiga Google. Waxaan la shaqeeyay kii aan jeclaa Dukaanka Indianapolis Kafee, Koobka Bean, si loo helo meelaynta mashiinka raadinta wanaagsan… laakiin tallaabada ugu horreysay waxay ahayd in la hubiyo inay ku qoran yihiin khariidadda Google:
Hadaad sameyso a ka raadi Google waayo, dukaan kafeega Indianapolis, Kahor intaan natiijooyinka raadinta midkoodna la soo saarin khariidad ka muuqanaysa dhammaan meheradaha qaxwaha ee ku yaal Indianapolis.
Helitaanka khariidadan ma aha arrin caan ah, ee waa arrin iska diiwaangelinaysa Google Local Business. Diiwaangelinta iyo aqoonsiga goobtaada Google Local Business waxay kugu ridi doontaa natiijooyinka mashiinka Raadinta Google ee caanka ah halkaas oo khariidad lagu soo bandhigo - sidoo kale waxay ku dhejin khariidad la raadinta Khariidadda Google.
Waxaa jira tan oo xulashooyin ah oo la heli karo sidoo kale - soo dejinta sawirro, rasiidh, lambarrada taleefannada, saacadaha shaqada, iwm. Nidaamka ansaxintu aad buu u fududaa dhab ah. Haddii aad leedahay nidaam taleefan otomaatig ah, waad dooran kartaa Google inuu kuugu soo diro kaarka wax lagu caddeeyo. Markaad hesho kaarka, kaliya gal koontadaada oo gal lambarka xaqiijinta.
Maxay yihiin hadalladan aad sugayso? Meheraddaada dul dhig khariiddada maanta! Miyaan sheegay inay lacag la’aan tahay?
Tags: khariidadaha ganacsiga googleganacsiga googlekhariidadaha googleGoogle+ Gudaha
Isku-hagaajinta Mashiinka Raadinta: Fudud Mise Dhibaato?
Tani waxay muhiim u tahay dhammaan noocyada ganacsiga maxalliga ah. Waxay ku siineysaa hogaamiyaashaada iyo macaamiishaada mustaqbalka in aad halkaas ku sugeyso iyaga oo sugaya. Ku meeleynta meheraddaada dusha sare ee natiijooyinka raadinta iyo in ka badan hal natiijo waxay ku abuureysaa saameyn weyn macaamiishaada. Shaki kumajiraan inay gujinayaan xiriirkaaga!
Raadi talo bixinno dheeri ah kuna biir wadahadallada Startups.com!